Ukutshutshiswa kobuKristu bobugqirha, ubuqhetseba kunye nabasetyhini
Sekudlulile ukuba ama Withi ayeyika kwaye azontiweyo kumaKristu. Kwaba namhlanje, abahedeni kunye neWiccans bahlala bejolise kwiintshutshiso zamaKristu-ngakumbi eMelika. Kubonakala ngathi bekudala bade bathatha ubungqina obuye bafikelela ngaphaya kobukho babo kwaye baba ngumqondiso kumaKristu-kodwa yintoni isimboli? Mhlawumbi ukuhlolwa kweziganeko kuza kusinika ezinye iinkcukacha.
Ukusebenzisa i-Inquisition ukuze kuPhephe ukuLahlwa kunye nabangaphandle
Ubuqhetseba kunye noBuchule boBhenketho kunye neNkundla yokuCandwa kweeNkundla zoKhotho: Ukusebenzisa iNkundla yokuCandwa kweeNkundla zoKhuselo ukuze kuKhuselwe ukuLahlwa kunye nabangaphandle. Umthombo: Jupiter Images
Ukudalwa kwengcamango yokunqula iidemon, ilandelwa yintshutshiso, yavumela ibandla ukuba lisebenzise ngokulula abantu ukulawulwa kobukhosi kunye nokuchazela ngokucacileyo abafazi. Uninzi lwento eyagqithwa njengobuthakathi kwakuyindalo yecawa yecawa, kodwa enye yayo yayinyani okanye yinyaniso-yoqobo yamahedeni kunye neWiccans.
Njengoko i-Inquisition yaqhubeka nge-1400s, igxininiso lwaye laguqukela kumaYuda kunye neengcikivo ekuthiwa ngabathakathi . Nangona uPapa Gregory IX egunyazisile ukubulawa kobugqwirha emva kwe-1200s, le fad ayizange ibambe. Ngowe-1484, uPapa Innocent VIII wakhupha inkunzi yenkomo evakalisa ukuba abakhohlisi babenene ngokwenene kwaye ngoko kwaba yintloni yokukholelwa ngenye indlela. Oku kwakuguquke kakhulu kuba ngo-906 i-Canon episocopi, umthetho wecawa, wachaza ukuba inkolelo yokukhokelela nokusebenza kobugqwirha kwakuyihlazo.
Ukutshutshiswa okongezelelweyo kwanto nayiphi na into eyayifana neenkolelo zowesifazane yahamba ngokukhawuleza ukuba ukuzinikela kukaMariya waba ngumsolwa. Namhlanje isibalo sikaMariya sithandwa kakhulu kwaye sibalulekile kwicawa yamaKatolika, kodwa kwi-Inquisition yayingumqondiso wokugqithisa ngokugqithiseleyo umfazi wesimo sobuKristu. Kwii-Canary Islands, u-Aldonca de Vargas wachazwa kwi-Inquisition ngaphandle kokumomotheka ekuthethwa ngaye ngoMariya.
Ngenxa yoko, abaphathi beecawa baxhatshaza babulala amawaka amabhinqa, kungekhona amadoda ambalwa, ngenzame yokwenza ukuba bavume ukuba bahamba esibhakabhakeni, babe nobudlelwane bezesondo kunye needemon, baba yizilwanyana iintlobo zobumnyama abamnyama. Umfanekiso apha ubonisa oko amaKristu ayecinga ukuba waqhubeka enkundleni yabathakathi apho uSathana ebengumongameli.
Abantu bayesaba into engayiqondiyo, ngoko abatyhulwa babedwe kabili: babesaba ngenxa yokuba babethetha ngokuba nguSathana bafuna ukuphazamisa uluntu lwabuKristu kwaye babesaba kuba akukho mntu wayazi ngokwenene oogqirha abazenzayo okanye njani. Endaweni yolwazi lokwenene okanye ulwazi, iinkokeli zamaKristu zenza izinto kwaye zenza amabali ayenzileyo ukuba ayenze abantu bawamthiya kwaye abamoyika abathakathi.
Abantu bathemba iinkokeli zabo zonqulo nezopolitiko ukuba banikezele ngolwazi oluchanileyo, kodwa ngokwenene "ulwazi" olunikeziwe lwaluyinto enqwenelekayo kwiinkokheli zabo zonqulo neenjongo zezopolitiko. Ukudala intshaba yabangcwangca bekhonza injongo yokunyaniseka kwezenkolo kunye nezopolitiko kuba abantu babefuna ukuzondana ukuze balwe notshaba owayefuna ukuwachitha. Ngaba akunjalo ekugqibeleni kubaluleke kunokuba ngaba amabali ayinyani okanye awunjalo?
ISabatha yeeNtshonalanga: iCawa yoBuchule bezobuNkokeli
Ubuxoki BamaKristu kunye noNgcaluko, kungekhona Okwenyaniso okanye Okwenziweyo Imfundiso yeCawa yezobugqwirha nobuqhetseba: UbuKristu beFiction & Prejudice, kungekhona ngokoqobo okanye kwiZenzo zangempela. Umthombo: Jupiter Images
Ukubonakaliswa kobugqwirha kwiirekhodi zecawa kunokuba kukuhle kakhulu. Phantse yonke into "yaziwa" ngexesha lobugqwirha yayiyinyani ecacileyo, izixhobo zabasemagunyeni abaxelelwa ukuba abathakathi babesongela kwaye kwafuneka bafumane into yokuchaza. Indalo yabo idlulile kwimifanekiso yenkcubeko eyaziwayo yonyango eqhubekayo nanamhlanje. Incinane kakhulu yokuqonda kwabantu ngabathakathi ayinanto nayiphi na imidala yamahedeni, eyayiyimvelaphi yobugqwirha nobuthakathi.
Abafundisi abaninzi babonakala bekuncitshiswe ekubunjweni, ngoko abathakathi baboniswa njengendlela yokuziphatha ngendlela elula ngokuchasene namaKristu. Ekubeni amaKristu eguqa, abagqwirha bebehleli ezintloko zabo xa bethoba ngamakhosi abo. Ukutya kwakuboniswa yi-Mass Mass. Umfanekiso ongasentla uchaza ezinye zezinto ezingaqhelekanga kunye nezinto eziqhawulayo amaKristu athile ayekholelwa ukuba ubugqwetha benza ebusuku.
Enye yeempawu ezidumileyo ze-Inquiry's witch-craze kwakupapashwa kweMalleus Maleficarum (i- Witches 'Hammer ) nguJakob Sprenger noHeinrich Kramer. La mabonki amabini aseDominican abhala ingxelo enobungqina bokuba ngababugqirha babenjani "ngokwenene" nokuba "benza ntoni" -i-akhawunti eyayinokubhikisana nenzululwazi yenzululwazi yanamhlanje, ingabonakali ukukhohlisa kwayo.
Akukude kakhulu nenyaniso ukubonisa ukuba i-Sprenger kunye ne-Kramer babephambi kweengxelo ze-propagandists, ukudala imithombo yamatyala kubungcali ukuze bancede baqikelele ukuba iziphathamandla zifuna ukwenza ntoni ngokubanzi. I-Sprenger ne-Kramer baxelele iinkokeli zonqulo into ababefuna ukuziva kwaye bancedisa ukwenza kube lula ukuba ezo nkokeli ziqhubekele ukutshutshiswa kwabagqwirha kulo lonke elaseYurophu. Iinjongo zezopolitiko nezenkolo ezibekwe yienkokeli zecawa zithathwa njengezona zibaluleke kakhulu kunemiphumo kwimigangatho yazo, imigaqo, okanye ukuziphatha - kwaye ngokuqinisekileyo kubaluleke ngaphezu kokushutshiswa kwanoma ubani na ongenamacala kwiintlawulo ezityalwa kubo.
Ubuqhetseba kunye noSathana: Abazingeli Ukukhwaza uSathana
Ukudibanisa ootyhi noSathana ngo-Ignorance, ukukhuthaza uloyiko kunye nobutshinga obusondayo nobuSathana: Ukudibanisa aba Withi kunye noSathana ngaphandle kwe-Ignorance, ukukhuthaza ukwesaba nokuzondwa. Umthombo: Jupiter Images
AmaKristu aseYurophu ephakathi kunye neyaphambi kwexesha elidlulileyo ayekholelwa ukuba uSathana wayeyinyani kwaye uSathana wayebandakanyeka kwiindaba zabantu. Injongo kaSathana yayiyinkohlakalo yoluntu, ukutshatyalaliswa kwezinto zonke ezilungileyo, kunye nokugwetywa kwabantu abaninzi ngangokunokwenzeka kwisihogo . Enye ithetha ukuba yiyiphi into ekholelwa ukuba wayifezile le nto yayiyinkampani yabantu abanikezela ngamandla angaphezu kwamandla.
Abagqwirha babekwahlukana ngokulula njengabakhonzi bakaSathana. Abangabambeleli nje kwisithethe senkcubeko yamandulo, abagqwirha babejoliswe ekutshutshisweni njengezigqila zezitha zikaThixo, uYesu kunye nobuKristu. Esikhundleni somphilisi okanye utitshala, umlumbi wenziwa kwisixhobo sobubi. Umlumbi wayebonakaliswa-kwaye waphathwa - njengobunzima kunokuba ngumntu onobuxoki. Eli qhinga lalingagqithwanga kwicawa ephakathi.
Amagosa enkolo kunye nezopolitiko zamaqela ahlukeneyo kunye neenkcubeko ezahlukeneyo baye bafumana ukulungelelanisa iintshaba zabo ngobubi obubi kakhulu. Kwintsapho yamaKristu entshona, ngokuqhelekileyo oku kuthetha ukudibanisa iintshaba kunye noSathana. Olu hlobo lokudemokelwa komdemoni olugqithiseleyo luvumela umntu ukuba ayeke ukubona intshaba yabo njengabantu ngokupheleleyo kunye nengxabano njengento engayifuni imfesane, ngokuqhelekileyo inkqubo, okanye nayiphi na into enjalo. Isiphumo esisodwa nje kuphela asikutshatyalaliswa kotshaba lomntu, kodwa ukutshabalalisa kwabo ngokupheleleyo. Kwimfazwe apho kubakho ubomi obubodwa, kusinda kuba yinto efanelekileyo yokuziphatha.
Umfanekiso ongasentla uchaza "u-Kiss Witch." Kwakukholelwa ukuba inxalenye yesenzo sokuba ngumtshi ekunikweni kukaSathana kwakuquka ukumanga emva kukaSathana. Kufuneka kukhunjulwe ukuba kunokuba kukho umntu obenokwenza ukuphilisa kunye nokubhula kwezithethe zamaqaba zobuhedeni, bebengenayo into enokuyenza noSathana. Emva koko, uSathana uyindalo yobuKristu kunye nezithethe zamasiko. Naluphi na "abathakathi" ababekhona babengabaninzi okanye abaxoxela iintlanga kwaye bebengayi kukholelwa kuSathana.
Abazingeli abatyhutshisa nabasetyhini abashushisayo
Ubugqirha njengendlela yokuxhaswa kweempembelelo zamakhosikazi Ukutshutshisa abathakathi kunye nabashushisi abasetyhini: ubugqirha njengendlela yokuxhomekeka kweempembelelo zamakhosikazi. Umthombo: Jupiter Images
Ukuxhaswa kwabasetyhini kumadoda kwakuyimxholo oqhelekileyo kwimibhalo yokuqala yamaKristu-ukugqithiswa kwezinto zombini zesiganeko sobukhosi kunye nesimo esibucayi besonto. Amaqela awazange agcinwe kwi-hierarchy nayiphi na ifomu yahlaselwa ngokukhawuleza. Akukho mlawuli olwabelwana phakathi kwamadoda asebuKristwini bendabuko, nokuba kusebandleni okanye ekhaya. Ubungqingili buya kusongela le ngcamango, njengoko iphakamisa amandla okuhlaziya iindima zesini, ngakumbi ekhaya.
Ngqina ukuba ukuhlaselwa kwangoku kwintando yesini kwintlalo kuye kwaqhubela phambili ukuxhaphaza engqondweni engacacileyo "imveli yentsapho," ngokukodwa ezo "zibeka abafazi kwindawo yazo" kwaye ziqinisa ukulawula kwabantu kwindlu. Nesibini isibini esitshatileyo sabasetyhini ababini okanye amadoda amabini, ngubani na omele ukuba ophetheyo kwaye othobela ngenyameko? Ungaziqondi ukuba amaKristu ayikayo ulwalamano olunjalo akayi kubuzwa ukuba enze ezo zigqibo ngokwabo-into yokuba abantu benza izigqibo ngokwabo kunokuba bathobele ukuvakalisa inkolo yomntu okwaneleyo ukuba bawanike ngokufanelekileyo.
Umbono wabasetyhini abangaphantsi kwamadoda , kwaye mhlawumbi utshaba lwezenzo ezifanelekileyo zonqulo okanye uluntu, luye lwasinda kulo lonke suku kwiindawo ezininzi zonqulo ezinokuzimelela kunye nezisiseko zehlabathi. Amaziko ezenkolo kunye neemfundiso ziyinkokheli yokuqala yeenkolelo zasendulo malunga neentlalo, ezempilo, ezopolitiko kunye nezenkolo ezingaphantsi kwamabhinqa. Nangona lonke uluntu lugxotha kwaye luphucula imeko yabasetyhini, unqulo luhlala luyisiseko esiyinkolelo seenkolelo kunye nezimo zengqondo ezithintela inkqubela phambili kwiingcamango zokuguqula ngokupheleleyo. Kwaye, apho abafazi abakwazi ukuhlaselwa ngokuthe ngqo, bahlaselwa ngokungqalileyo ngokungahambi kakuhle ngokuphathelele "imilinganiselo" yabesifazane xa kuthelekiswa neendlela ezintle zokuziphatha "zamadoda" okanye "izixuku".
Kuya kuba yimpazamo ukutsho ukuba ukutshutshiswa kobuKristu bobugqwirha nobugqwirha kwakungeyona nto kodwa umzamo wokukhusela abafazi kunye neempembelelo zesetyhini. Uluntu olungamaKristu, ezopolitiko, kunye ne- telojiki ngelo xesha kwakungekho nje into elula. Ngexesha elifanayo, kunzima ukugqithisa inxaxheba kwindlela yokuziphatha engathandabuzekiyo kunye nokuxhatshazwa ngokwesini kwabesilisa abadlalele ekutshutshiseleni abathakathi. Kubonakala ngathi ukuba bengabikho, ubundlobongela obugqithiseleyo bujoliswe kwabasetyhini kunye nabathakathi ababesithi mhlawumbi babengeke kwenzeke.
Abagqirha, i-Misogyny, no-Patriarchy: Ukuxhatshazwa kwabaseTyhini
Indlela yokuziphatha kakubi ngayo Ingxaki Yobungqina Bogqirha Ababuqili, i-Misogyny, kunye no-Patrikarchiy: Indlela yokuziphatha kakubi ngayo i-Fear of Witches. Umthombo: Jupiter Images
Ukutshutshiswa kobugqwirha kwafikelela kwi-zenith ngexesha apho ububungqina bobuKristu ngokumelene nobulili bude buye lwaba yi-misogyny ephazamisayo. Kuyamangalisa indlela abantu abathandabuza ngayo ubulili besini. Njengoko kuchazwe kuMalleus Maleficarum: "Bonke ubugqirha bubangelwa ukukhanukela ngokwenyama, okukuyo kwabesifazane abangenakunyaniseka." Elinye icandelo lichaza indlela abathakathi abaye baziwa ngayo "... baqoke amalungu omzimba ngamanani amaninzi, amaninzi angamashumi amabini anesithathu namalungu kunye, uwabeke entenyeni yentaka."
Kubonakala ukuba bekungabonakali ngokugqithiseleyo kunye neengqokelela zabo - kukho ibali lendoda eya waya kumlumbi ukuba ipenisi yakhe elahlekileyo ibuyiselwe: "Watsho umntu ohluphekileyo ukuba akhwele umthi othile, aze athathe oko akuthandayo ephuma kwidleke apho kwakunamalungu athile.Uye xa ezama ukuthabatha enkulu, umlumbi wathi: Awufanele uthathe loo nto; wongeza, kuba ungumfundisi wasepareni. "
Kwaye abanye abantu bathi inkolo ayikho yonke into efuna ukucinga!
Le mivo ayiyinto eyingqayizivele okanye engaqhelekanga-eneneni, ngenxa yeenkulungwane zeentsholongwane zesondo zesifo sengqondo kwiqela lezonto. Umfilosofi uBotius, umzekelo, wabhala kwi -Consolation of Philosophy ethi "Umfazi uyitempile eyakhiwe kwindawo yokuhambisa amanzi." Kamva, ngekhulu leshumi, u-Odo waseCluny wathi "Ukumkela umfazi kukufaka isaka lomquba."
Abafazi babonwa njengemingcipheko yokomoya bokwenene kunye nobunye kunye noThixo, oku kunceda ukucacisa ukuba kutheni abaphandi bajolise kubasetyhini ngaphezu kwamadoda. Icawa yayinobandlululo obude kumabhinqa, kwaye le nto yanikezwa xa imfundiso yenkonzo yeedemon yayigxininiswa njengotshaba ibandla elifuneka lijongane nalo. Le animus ayizange iphele ngokupheleleyo nanamhlanje. Abasetyhini abatshutshiswa kwaye bahlushwa, kodwa bagcinwa ngamabomu kwiindawo zogunya kunye noxanduva olugcinwe kuphela kubantu.
Ngaphantsi kobandezelo, abatyholwa ngabathakathi babeza kuVuma kwiCandelo elithile
Ngaphantsi kohlwaywa, utyhutshiso lwabangobugqwetha beza kuvuma ukuba malunga nantoni na into yokuvuma iiNgqobhoko Umthombo: Jupiter Images
Ukuvuma kobugqwirha , ekhishwe phantsi kokuhlanjululwa okanye usongelo lokuhlushwa, ngokuqhelekileyo lufakwe kwiinkcazo zamanye abathakathi , ukugcina ii-Inquisitors kwishishini. E-Spain, iirekhodi zecawa zithetha ibali likaMaria wase-Ituren elivuma phantsi kokuhlanjululwa kangangokuba yena noodade abadumi bajika baba ngamahashe kwaye bajikeleza esibhakabhakeni. Kwisithili saseFransi, amabhinqa angama-600 avunyelwa ukuba axoxe needemon. Ezinye iidolophana zaseYurophu zaziye zachithwa.
Nangona abantwana bezonyango namaYuda babengakaze baninzi kwiindlela zenceba ezivela kwi-Inquisitors, abantwana ababetholwa ngabathakathi babecala ngakumbi. Ezi ntwana zitshutshiswa ngenxa yobuthakathi-amantombazana emva kweminyaka eyi-9 nesigamu, amakhwenkwe emva kweminyaka eyi-10 nesiqingatha. Kwabantwana abancinci banokuhlushwa ukufaka ubungqina obuchasene nabazali.
IJaji laseFransi lizisole ngokuba lihle kakhulu xa igweba abantwana abancinci ukuba babethe ngelixa bebukele abazali babo bashise endaweni yokugweba. Abantwana abanako ukugweba ngokulula ukunyaniseka okanye ukunyaniseka kwabazali babo, kodwa ngokuqinisekileyo banokutshutshiswa okanye balawulwa nguSathana. Ithemba elilodwa lokusindisa imiphefumlo yabo kwakukuthi bahluthe amathambo abo ukuba baxoshe iimpembelelo zikaSathana.
Ububungqina bokuzithandela kumntu obancinci njengababini banokuvunyelwa nangona kungaphathwa kakubi kwezinye iimeko. Oku kwakuwuphawu lobunzima bokugqithiswa kwabathakathi. Abathakathi kunye nobugqwirha, bobabini babesenkonzweni kaSathana, besongela ubukho bobuKristu, ibandla lobuKristu kunye namaKristu ngokwabo. Imilinganiselo eqhelekileyo yobulungisa, ubungqina, kunye nezilingo zashiywa ngenxa yokuba akukho mntu wayefuna ukuthatha ithuba lokuba ukuhlonipha amalungelo kunye nemigangatho yemveli kunokuvumela umntu onetyala ukuba abalekele isigwebo.
Indlela Ukutshutshiswa Kobugqirha Kubonakaliswe Ukunyanzelwa Kwezesondo zabathenjwa
Ukuxhatshazwa kwaBathakathi kubonakaliswe ukunyanzelwa kwezesondo zabagwebi abahlukumezekileyo kunye nokuxinzezelwa kwezesondo: indlela ukubethelwa kobugqirha kubonakaliswe ukunyanzelwa kwezesondo zabagwebi. Umthombo: Jupiter Images
Ukuphenywa kobugqwirha kwakulandela iinkqubo ezininzi zeeNkundla zokuCandwa kweeNgcaciso, kodwa ngezinye iibhonasi ezongeziweyo. Utyholwa oogqirha bonke bahlanjululwa behamba, bebolile zonke iinwele zabo zomzimba, baze "bahlulwe."
I- Malleus Maleficarum yecala ngesondo yayisisigxina esichaphazelekayo malunga nendlela yokujongana nabathakathi, kwaye le ncwadi yatsho ngokucacileyo ukuba bonke abathakathi babetha "uphawu lomtyholi" olungafunyanwa ngokuqhubela phambili. Abafaki-zicelo babekhawuleza ukukhangela "iinkohlakalo" ezibizwa ngokuba "izilwanyana," ezinobunzima obufuneka ukuba zibe ziinkozo ezongezelelweyo ezisetyenziswe ngabathakathi ukuze bancede iidemon.
Izibambo ezitshisiweyo ezibomvu zazisetyenziselwa amabele amabhinqa kunye nama-genitalia. Umphandi uNancy van Vuuren uye wabhala ukuba "Amalungu esini esinikwa ngabesifazana anike umtsalane okhethekileyo kumntu ohlukumezayo ." Akufanele kusimangalise ukuba malunga nexhoba lokuhlushwa ekugqibeleni livuma.
Ukuphumelela kokuThatshazwa ngokwesondo
Xa abantu bexhatshazwa, kwaye ngokukodwa xa ukuhlushwa kubandakanya ukuxhaphazwa ngokwesini , akuthathi ixesha elide ukuba ihlabathi lexhoba linciphise ngaphandle kweentlungu kunye nomnqweno weentlungu zokuphela.
Xa kuphela into ebalulekileyo ukupheliswa kwentlungu, ixhoba liya kuxelela umntu othunjayo nantoni na ukuba bafune ukuva. Akunakuba yinyaniso, kodwa ukuba intlungu iphela yiyo yonke into ebalulekileyo.
Ukugxeka amaxhoba okuThatshazwa ngokwesini
Ukuba amadoda aphinda aphandle abaphangi ayefanele avuke, kwakucingelwa ukuba umnqweno awungenayo kubo , kodwa kunoko bekukho ukubonakala kwabesetyhini. Abasetyhini babecinga ukuba babe nezidalwa ezixhatshazwa ngokwesondo, ngelixa ama-Inquisitors afuneke abe ngaphaya kwemiba enjalo. Kakade ke, abafazi babelindelekile ukuba bavume ukuba babangela ukuba abaphandabuzayo bavuswe ngesondo, bekhokelela kumbuzo omtsha wemibuzo kunye nokuhlushwa.
Ubundlobongela kunye nokuPhenywa kwaBathakathi
Ngaba ngababuqili babonakalisa ubulili besini kunye namandla kwiCawa yamaPatriatriki? Ubundlobongela kunye nokuCelwa kweeNtshi: Ngaba ama Witches babonakalisa ubulili besini kunye namandla kwiCawa yamaPatriatriki? Umthombo: Jupiter Images
Ukuba abatrobi kunye nobugqwirha baye bahlaselwa ubungqina obufikelele ngaphezu kobukho babo, ukuba baye baba ngumqondiso wento enkulu kumaKristu, ngoko yintoni na isimboli? Kubonakala kum ukuba abagqwiri babenendima engokomfuziselo yindoda, izikhulu zonqulo zaseYurophu. Abagqwiri babengabambelelwanga kwindlela ekholelwa kuyo, kwaye ngokuqinisekileyo abazange baphenduke iidolophini ezizeleyo.
Enyanisweni, ininzi yalabo batyholwa ubugqwirha cishe yayingekho netyala lento. Kunoko, unyango lwabo ezandleni zamadoda, kunye neengcamango ezisetyenziswe ngala madoda, kubonisa ukuba ukunyanzelwa kobugqwirha kwakungokomqondiso wokuxinzezelwa kwabasetyhini ngokubanzi, ngokwesini, ngokwesini kunye nokuziphatha ngokwesini. Ndiyakuzonda ukulila i-Freudian, kodwa ndicinga ukuba kule ngxaki, izibhengezo zabantu ngokuphathelele ukuxhatshazwa kwezesondo zoogqirha ziyimeko ecacileyo yokubala.
Ndicinga ukuba ngaba ngabaphathi bezenkolo babenomdla kwaye banelisekile ngesini sabo, kodwa ekubeni ingcamango yabo yokungazivumeli ukuba ivumeleke, bekufuneka baqhube abanye. Ukuba abafazi, izilo ezimbi ngokwesondo, bebonke babenomthwalo wecala lezobubingeleli, ngoko ke ababingeleli babekwazi ukuqhubeka beziva bengcwele - kwaye bangcono, "bangcwele kunawe," banobulungisa kwaye bangcwele kunabesifazane abathandwayo.
Xa elinye iqela lichitshutshiswa ngabanye, kwaye ngakumbi xa abashushisayo belahla ngamabandela imigangatho eqhelekileyo yobulungisa, iinkqubo, njalo njalo, kubalulekile ukubheka ukuba ngaba batshutshisi basabela nje kwisongelo esicatshulwayo (ngokwenene okanye ekucingweni) okanye ukuba kodwa endaweni yoko basabela kwizinto ezinkulu kwaye basebenzisa amaxhoba njengendawo yokuxhalaba ngenxa yokwesaba okukhulu. Maxa wambi bobabini banokusebenza, nabo.
UJoan waseArc, uMlingo noNkohliso
Abasetyhini Abanamandla Babenokwesaba Ukutshutshiswa kobugqirha uJoan waseArc, uMlingo noNokholo: Abasetyhini abaneziqhamo babenokwesaba ukugwetywa kobugqirha. Umthombo: Jupiter Images
Nangona ukutshutshiswa kobugqwirha kubonakala kuyenziwe ngokubhekiselele kumabhinqa asekudala ahlala emacaleni omphakathi kwaye ngubani na oye waba yingxaki ebantwini, kukho ubungqina bokuba abafazi abanamandla kakhulu banokuba yizinto ekujoliswe kuzo. UJoan weArc ngumnye umzekelo odumile wowesifazane ophumelele kakhulu kodwa watshiswa njengomtshizi ngenxa yengxaki yakhe.
UJoan waseArc , oye waba ngumgcini oyingcwele waseFransi, wayeyintombazana eyayinemibono engummangaliso kaSt. Michael, uSt. Catherine, noSt. Margaret ngexesha leMinyaka YeMinyaka eyayiyinto eyamqinisekisa ukuba wayemiselwe nguThixo ukukhokela amaFrentshi aphumelele ukunqoba abahlaseli baseNgesi.
Ngo-1429 waqinisekisa ukuba uDauphin uCharles VII wamvumela ukuba abonise ukuba unako ukufanisa iinjongo zakhe waza wahola amabutho aseFransi ukuba akhulule isixeko sase-Orleans kwisiNgesi. Ekugqibeleni wagqithwa ngabaseBurgundi, ababambene baseNgilani, waza wabuyela kwisiNgesi owawutshisa kwisibonda njengomtshi ekuphikiseni ukuba iimangalo zakhe zokunxibelelana ngokuthe ngqo noThixo zazingabonakaliyo kunye nokungahloneli kwiCawa.
Kwada kwada ngoJune 16, 1456, uPapa Callistus III wamxelela uYoan waseArc ukuba abe mmsulwa kwiintlawulo zobuqhetseba nobugqwirha. Kunokuba nzima kumaziko anamandla ukuba avume impazamo yaluphi na uhlobo, kodwa ngakumbi xa iimpazamo zibandakanya ukungabi nabulungisa okukhulu okubangelwa ukubandezeleka nokufa kwabantu abangenacala. Wonke umntu uthanda ukuzicingela ngokwabo intliziyo ecocekileyo nokwenza umsebenzi omuhle, nangona xa belimaza abanye. Ngamanye amaxesha imfuneko yokulungelelanisa izenzo ezenza umntu abe neengcamango zobuqhetseba, inkohlakalo kunye nobudlova ngokubanzi-kwaye ngoko ke ukungcatshiswa kwanoma yimiphi imigaqo yokuziphatha abacinga ukuba bayibambe iqale.
Ukusebenzisa abaNkoyi kunye nokuCima ubuqhetseba
Ukubulala abathakathi njengendlela eyona ndlela yokubulala ubugqirha ekusebenziseni ubugqi nobuqhetseba. Ukubulala abathakathi njengendlela ehle kakhulu yokubulala ubuqhetseba. Umthombo: Jupiter Images
Ukutshisa nokuxhoma kwakukho iindlela ezaziwa kakhulu ezenziwa ngabathakathi abatyhutyha baseYurophu. Ukutshisa kwakubonakala kuyinto eqhelekileyo kwilizwekazi laseYurophu xa ukuxhoma kwakuqhelekile eBrithani - kwaye ngokunjalo nakwii-colonies zaseMerika emva koko. Isigwebo sokufa sabekwa kwiintlobo ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho kulo xesha, kodwa ubugqwirha ngokukhethekileyo babetyala ngokufa ngenxa yesi- Eksodus 22:18: "Awuyi kuvumela umlingo ukuba uphile" kunye neLevitikus 20:27: " Indoda okanye umfazi onommoya oqhelekileyo, nokuba yindoda, uya kubulawa; baya kubaxuluba ngamatye.
Abagxeki ababebekwe iinjongo zokuqala ze-Inquisition zaphantse zifezekiswe ekuqaleni. Ngokuqhelekileyo babe nethuba lokuguquka baze bathumele kwiCawa; kuphela emva kokubuyela kwakhona ekugqibeleni abazange baphumelele ekusebenziseni. Nangona kunjalo, basenokuba banikwe elinye ithuba lokuguquka. Oogqirha bafumana phantse ukuchasene ngqo: ukusetyenziswa kwakusetyenziswa emva kokumangalelwa kokuqala kwaye kwakunqabile ukutyholwa abatrobi abavunyelwe ukukhululeka emva kokuguquka.
Oku kunceda kubonakalisa izinga lokusongela iSonto elenza ngobugqwirha nobugqwirha. Abathakathi babengenakuvunyelwa ukuba baphile nantoni na ukuba yintoni na - kungakhathaliseki ukuba bekulungele ukuvuma yonke into ababeyityholwa ngayo kwaye baphenduke ngokupheleleyo. Ububi babo babunomngcipheko omkhulu kwiindawo zobuKrestu kwaye kwakufuneka baxhamle ngokupheleleyo, kungekhona ukungafani nomdlavuza omele unqunywe ukuze ungawubulali umzimba wonke. Kwakungabikho ukunyamezela okanye ukunyamezela kwabagqwirha - kwakufuneka kupheliswe, nayiphi na indleko.
Abanye baye bathi baninzi abafazi abatyhiyagalolunye abafazi babulawa njengabathakathi, nangona bambalwa babenokuba netyala lobuqhetseba ngokwenene, kwaye ngenxa yokuba le nto ibonisa umzamo wokubulala abafazi ngokuqhelekileyo kufuneka kuthiwe "Ukubulawa kweNkqantokazi yabesifazane." Uphando olutshanje lubonisa ukuba abaninzi abatyholwa abatrobi babengamadoda, kungekhona nje ngabasetyhini, kwaye elo nani lalabo ababulawayo liphantsi kakhulu. Uqikelelo namhlanje luvela kuma-60,000 ukuya kuma-40,000. Nangona sithembeke ngakumbi, mhlawumbi asikwazi ukuhamba ngaphezu kwabantu abayi-100,000 ababuleweyo kulo lonke elaseYurophu kunye nexesha elide. Ngokucacileyo kubi kakhulu, kodwa kungekhona "iHolocaust".
Ukuzingela Abazingeli kunye noshutshiso eMelika
Salem njengomzekelo we-Iconic woThuselo lwaBantu Utshutshiso bobuqili kunye noThutshiso eMelika: Salem njengomzekelo we-Iconic woThuselo loLuntu. Umthombo: Jupiter Images
Njengokuba amaninzi aseMelika ayazi, ukuzingela inkohlakalo kwathintela nakwii-colonies zaseMerika. I- Salem Witch Trials ilandele i-Massachusetts Puritans ingene kwi-American consciousness njengokuba yinto engaphezulu nje kuphela ekubulaweni kwabathakathi . Bona, njengezilingo zaseYurophu, baye baba ngumqondiso. Kwimeko yethu, izilingo zobugqwirha ziye zaba ngumqondiso wezinto ezinokungahambi kakuhle xa abantu abangenalwazi bengahlambulukanga, ngokukodwa xa bexutywa nje ngeenkokheli kunye nabalambileyo abanamandla.
Ibali le Salem laqala ngo-1692 xa amantombazana ambalwa, ayenobungane kunye nekhobokazana elibizwa ngokuba yiTituba , waqala ukwenza ngokumangalisa - ukukrakra, ukugubha, ukukhwaza njengezinja, njl njl. Kungekudala amanye amantombazana aqala ukwenza ngendlela efanayo kwaye ngokuqinisekileyo bonke kufuneka babe neidemon. Amantombazana amathathu, kuquka uTituba, atyholwa ngokukhawuleza ngobuqhetseba . Isiphumo sasifana namava aseYurophu, kunye nokuphendulwa kwamakhonkco okuvuma, izigwebo kunye nokubanjwa okungakumbi.
Ngomgudu wokunceda ukulwa nenkohlakalo, inkundla ikhulule imigaqo yemveli yobungqina kunye nenkqubo - emva koko, abathakathi bayisongelo elibi kwaye kufuneka mayeke. Esikhundleni semithetho eqhelekileyo kunye neendlela, iinkundla zasebenzisa oko kwakuqhelekileyo phakathi kwabafundi beeYurophu eYurophu - ukuxubusha imizimba yabasetyhini ngamanqaku, amabala anqamlekileyo, njl njl. Kwakwamukelwa "yimithombo yembonakalo" yobungqina - ukuba umntu wayenombono ibhinqa lingumlumbi, elo lilungele ukulungiselela abagwebi.
Abantu ababulawe kakhulu abazange bangenise ngokukhawuleza kunye nokuthobela kumagunya. Kuphela abo babesingcikiva okanye abanobutsha babulawa. Ukuba uvume ukuba ungumlumbi waza waphenduka, wawunethuba elihle lokuphila. Ukuba wenqatshelwe ukuba ngumlumbi uze ugxininise ukuba unamalungelo okumele ukuba avunywe, ubesendleleni yokukhawuleza ekusebenzeni. Amathuba akho nawo ayenzibi ukuba ubengumfazi - ingakumbi ukuba uneminyaka endala, ulahlekile, unenkathazo okanye ngandlela-thile umfazi ongeyingozi.
Ekugqibeleni, abantu abalishumi elinesithoba babulawe, babulawa entolongweni yaye indoda enye yayicindezelwa ukuba ibulale phantsi kwamatye. Le ngxelo engcono kuneyona esiyibonayo eYurophu, kodwa oko akuthethi kakhulu. Amagunya enkolo kunye nezopolitiko asebenzise ngokucacileyo ukulingwa kweedemon ukubeka iingcamango zabo ngokweenkolelo kunye nobulungisa kubantu basekuhlaleni. Njengoko eYurophu, ubundlobongela bekuyisixhobo esisetyenziselwa inkolo kunye nabantu bezenkolo ukunyanzelisa ukulingana kunye nokuhambelana nokujongana nokuchasana kunye nentlalo yoluntu.
Iingcali kunye neeSapeapeats
Ukutshutshisa nokutshutshisa abathakathi njengendlela yokuhlaselwa kweengxaki zentlalo, ootyhuthi kunye neengxaki zokutshutshisa: ukutshutshisa nokutshutshisa abathakathi njengendlela yokuhlaselwa kweengxaki zentlalo. Umthombo: Jupiter Images
AmaYuda kunye neentembelelo babehlala bephathwa njengeengxaki zezinye iingxaki zeentlalo kunye nabathakathi abaphelelanga. Iingingqi kunye neentlalontle ezininzi zentlalo kunye nezopolitiko zenzeke nakwabo abaneengxaki ezinkulu nabathakathi. Yonke ingxaki yentlalo, yezopolitiko kunye neyendalo yayixelwe ngabathakathi. Ukungaphumeleli kokukhula? Abagqwiranga benza. Uhambe kakubi? Iingcwatshe zetyhefu. Ukungqubuzana kwezombusazwe nokuvukela? Abangcwangca basemva. Isithintelo kuluntu? Abagqwirha bachaphazela abantu.
Ungabikho mntu ucinga ukuba intshutshiso yabathakathi iye yaxhomekeka kwixesha elide, kufuneka kuqaphele ukuba ukuzingela inkohlakalo - kunye nokubulala - kuqhubela phambili kwixesha lethu "elikhanyisiweyo". Ukudalulwa kwecawa yobugqwirha kunye nokunqula uSathana kuye kwabangela isithintelo esinzima kunye negalelo ebantwini esingahlawulwa ngokupheleleyo.
Ngomnyaka we-1928, intsapho yaseHungary yahlulwa ngokubulala umfazi omdala ayecinga ukuba ngubuqili. Ngomnyaka we-1976, umfazi waseJamani owayengumhlwempu wayekrokrelwa ukuba ngumlumbi kwaye wayehlala esondelene naye, ngoko abantu beli dolophu elincinciweyo, bamkhanda ngamatye, bawabulala izilwanyana. Ngowe-1977 eFransi, umntu wabulawa ngenxa yobuthakathi. Ngowe-1981, isixuku samkhanda ngamatye ukuba sife eMexico ngoba babekholelwa ukuba ubugqwirha bakhe bangela ukuba kuhlaselwe uPapa .
E-Afrika namhlanje, ukwesaba kobugqwirha kubangele ukutshutshiswa nokufa kwabantu ngokuqhelekileyo. Abazali abanoyiko lokuba abantwana babo banalo okanye ngababuqili babulala okanye bajike ezitratweni. Amagunya karhulumente azame ukuyeka ukuphazamiseka okunjalo, kodwa abanalo inhlanhla eninzi. Bobabini inkolo yobuKristu kunye nobuKrestu banelungelo lokondla abantu inkolelo yokukholelwa inkohlakalo kwaye oku kubangela abanye ukuba balimale.
Akunjalo nje izigwebo zobuthakathi obangela ukuba abantu baziphathe njengale. Ezinye izinto ezininzi zinokuba yinto yokutshutshiswa kunye nokutshutshiswa. Ngamanye amaxesha iziganeko ezisongelwayo zinyani kwaye ngamanye amaxesha azikho; kwimeko enoba, izinto ezisongelayo ziphakanyiswa ukuba kubekho abantu abasayikuziva beboshwe ngemigangatho yemveli yobulungisa okanye yokuziphatha ukuze bahlangabezane neentshaba zabo. Iimiphumo zisoloko zinobudlova kunye nokukhathazeka okulandelwayo egameni elungileyo kunye noThixo.
Abantu baseTshayina-baseMerika kunye neTranscontinental Railroad
Isifundo sokufunda IsiNgesi: Umhlobo wam uPetros
I-TokyoPop Manga Creator (Software) Ukuhlaziywa
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Juxtaposition kwi-Art